कुन साइजका स्तनप्रति पुरुष आकर्षित हुन्छन् ? - समायोजन खबर
स्तन युवतीको सौन्दर्यको मानक हो । त्यसैले त हरेक युवती चाहन्छिन्, कसिलो, पुष्ट एवं सुडौल स्तनप्रति बढीभन्दा बढी पुरुष आकर्षित हुन्छन् । प्राकृतिक रुपमा सबैको स्तनको आकार र बनौट एकसमान हुँदैन । तर, केही ठूला र केही सानो हुँदैमा यसमा चिन्ता लिनु पर्ने भने छैन । सबै सौन्दर्य भनेको स्तनको साइजमात्र पनि होइन ।
एक अध्ययन अनुसार सानो वा ठूलो कुन प्रकारका स्तनमा पुरुषको आकर्षण बढी हुन्छ भनि गरिएको एक अन्तरराष्ट्रिय सर्बेक्षण यसबाट एकरुपता पाइएको थिएन । त्यसमा पुरुषलाई सोधिएको थियो, कुन ब्रेस्ट साइज ठिक हुन्छ ? यसमा हरेक देशको महिला र पुरुषको सोंचमा एकरुपता पाइएन । यद्यपी अधिकांशको जवाफ एउटै थियो । अर्थात सर्बेको निचोड थियो कि, सिकप साइज ब्रेस्ट सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ ।
एक अन्तर्रा्िष्ट्रय सर्वेक्षण एजेन्सी मेडिकल टेलिकन्सल्टेन्शन वेबसाइट जावाका अनुसार, सामान्यत पुरुष र महिला ठूलो कप साइजको ब्रेस्ट रुचाउँछन् । यसमा धेरैजसो महिला पुरुष सि, डि र डि–डि साइजको ब्रेस्ट मन पराउँछन् । यस सर्बेमा एक हजार पुरुष र ९ सय बढी महिला सहभागी थिए ।
२०७६ साउन ३२ गते राती ८ :०५ मा प्रकाशित
लकडाउनमा रहेका एसइई परिक्षार्थीलाई नेविसंघ खोटाङको रेडियो ट्युसन
नयाँ वर्ष २०७७ सुरु
खोटेहाङ गाउँपालिका : बिदेशबाट फर्केकासँग घरदैलो